15 Archives - Tameelay
တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သူမှားနေရင်တောင်မှလက်ခံနားလည် ပေးရမှာပဲ။ ချစ်သူ/ရည်းစားရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တစ်ယောက်သိက္ခာကို တစ်ယောက်ကကာကွယ်ပေးရမယ်။ အပုပ်မချသင့်ဘူး။ လူတိုင်းဟာ အတ္တသမားချည်းပဲ။သူ့အတ္တကို ထိပါးလာတာ လူတိုင်းမကြိုက်ကြဘူး။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ဒီအချက်ကသိပ်အရေးကြီးတယ်။ဆိုပါတော့… ထောင်ကျနေတဲ့ လူတွေကိုခင်ဗျားမှားတယ်လို့ သွားပြောရင်ဘာပြန်ပြောမယ်ထင်လဲ။ “တကယ်က ကျွန်တော် လူမှားပြီး တရားစွဲခံခဲ့ရတာပါ”“တရားသူကြီးက လာဒ်စားလို့ပါ” “ကျွန်တော် ဘုရားမကြိုက်တာ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး”ဆိုတဲ့အဖြေပဲ ပေးကြလိမ့်မယ်။လူ၁၀၀မှာ ၈၀လောက်က ဝန်ခံရဲကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းဟာ မိမိအတ္တကို မိမိကာကွယ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ပဲပေါ့။ချစ်သူ/ ရည်းစား အချင်းချင်း ကွယ်ရာမှာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မကောင်းကြောင်းပြောဆိုနေရင် ဒါဟာ တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ ချစ်နေဆဲအချိန်မှာမြုံထားကြပေမယ့် ပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့အခါအချင်းချင်း ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေ ဖော်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာ ငြိမ်းအေးမှု ရှိပါတော့မလဲ။အမှားကင်းတဲ့ လူရယ်လို့ ဒီလောကမှာ မရှိဘူး။ သူလည်းမှားသလို ကိုယ်လည်းမှားမှာပဲလေ။ဒါကို နားလည်သဘောပေါက်ထားရမယ်။ ကွယ်ရာမှာ အချင်းချင်း ဝေဖန်အပုပ်ချနေတဲ့ချစ်သူ/ရည်းစားတွေက မြဲမယ်လို့ထင်သလား။ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 15
တစ်ဖက်သတ် . . . . ကိုယ့်အနားမှာ မပျော်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို . . . ဆွဲထားရတာ အတော့်ကို ပင်ပန်းပါတယ် ။
တစ်ဖက်သတ် . . . . ကိုယ့်အနားမှာ မပျော်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို . . . ဆွဲထားရတာ အတော့်ကို ပင်ပန်းပါတယ် ။ ရှိနေစေချင်ရုံစိတ်တစ်တည်းနဲ့ မနေချင်တဲ့သူကို ကိုယ့်ဘက်ကချည်း ဆွဲထားမိတာလေ ။ မာနတွေလဲ မထားဖြစ်ခဲ့သလို သိက္ခာတွေလဲ မကျန်တော့တဲ့အထိအောက်ကျနောက်ကျ နိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ဒေါသတွေ ထွက်မိတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ရူးနေမိတာလေ ။ ချစ်လွန်းလို့ပါဆိုတဲ့ အဖြေက လွဲလို့ တခြားဖြေစရာမတွေ့ခဲ့ဘူး ။ ကိုယ့်ဘက်က ချစ်လွန်းလို့ ဂရုစိုက်မှုတွေ ကြင်နာမှုတွေ ကိုယ်တတ်နိုင်ခဲ့တာတွေထက် ပိုပြီး ပေးခဲ့ပေမယ့် တစ်ဖက်က အသိအမှတ်ပြုဖို့နေနေသာသာ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေခဲ့တာလေ ။ သူ့ကို ချစ်ရတာ စိတ်ပင်ပန်းရတယ် … Read more
မကြင်နာနိုင်တော့တဲ့အခါစွန့်ပစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ၊အတူနေတဲ့အခါ သံသယမထားပါနဲ့၊ သံသယဖြစ်နေရင်အတူမနေတာအကောင်းဆုံးပါ၊သံသယဆိုတာ မီးကျိခဲလိုပဲကိုင်ထားတဲ့လက်ကို လောင်မြစ်စေပါတယ်၊ သံသယတွေများလာလေအကြင်နာတွေပျောက်လာလေပါပဲ၊အကြင်နာတွေမပါပဲ တစ်သက်လုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်၊ရင်ဆိုင်နေနေရတာနဲ့စာရင်၊ တစ်ယောက်တစ်လမ်း၊ တစ်နေရာစီ လမ်းခွဲကျော့ခိုင်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ၊မခွဲနိုင်သေးဘူး၊မစွန့်ပစ်နိုင်သေးဘူး၊ အတူရှိ၊အတူနေမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊သံသယကိုဖယ်၊တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ရိုးသားမှုရှိပြီး၊ ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ပါ၊ကြင်နာမှုတွေမပါရင်၊နှစ်ယောက်လုံးဝေဒနာအမှုသည်တွေဖြစ်နေမှာအသေအချာပါပဲ။ မကြင်နာချင်ပေမယ့်လည်းအတူနေမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြင်နာတတ်လာအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့၊ ကြင်နာတတ်လာမှနာကျင်တာတွေမေ့ပျောက်နိုင်မှာပါ၊နာကျင်တာတွေမေ့ပျောက်နိုင်မှအတူနေရတဲ့ဘဝခဏတာမှာအေးချမ်းတဲ့အသိုက်မြုံလေးကိုဖန်တီးနိုင်မှာပါ၊ အေးချမ်းသောအသိုက်အမြုံကိုဖန်တီးနိုင်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊သူတစ်ပါးတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရှင်ဇနက(မန္တလေးစာသင်သား) မၾကင္နာႏုိင္ေတာ့တဲ့အခါစြန္႕ပစ္လုိက္တာအေကာင္းဆုံးပါ၊အတူေနတဲ့အခါ သံသယမထားပါနဲ႕၊ သံသယျဖစ္ေနရင္အတူမေနတာအေကာင္းဆုံးပါ၊သံသယဆုိတာ မီးက်ိခဲလုိပဲကုိင္ထားတဲ့လက္ကုိ ေလာင္ျမစ္ေစပါတယ္၊ သံသယေတြမ်ားလာေလအၾကင္နာေတြေပ်ာက္လာေလပါပဲ၊အၾကင္နာေတြမပါပဲ တစ္သက္လုံးမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ရင္ဆုိင္ေနေနရတာနဲ႕စာရင္၊ တစ္ေယာက္တစ္လမ္း၊ တစ္ေနရာစီ လမ္းခြဲေက်ာ့ခုိင္းလုိက္တာအေကာင္းဆုံးပါ၊မခြဲႏုိင္ေသးဘူး၊မစြန္႔ပစ္ႏုိင္ေသးဘူး၊ အတူရွိ၊အတူေနမွျဖစ္မယ္ဆုိရင္၊သံသယကုိဖယ္၊တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ရုိးသားမွုရွိၿပီး၊ ယုံၾကည္မွုေတြတည္ေဆာက္ပါ၊ၾကင္နာမွုေတြမပါရင္၊ႏွစ္ေယာက္လုံးေဝဒနာအမွုသည္ေတြျဖစ္ေနမွာအေသအခ်ာပါပဲ။ မၾကင္နာခ်င္ေပမယ့္လည္းအတူေနမွျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ၾကင္နာတတ္လာေအာင္ႀကိဳးစားရမွာေပါ့၊ ၾကင္နာတတ္လာမွနာက်င္တာေတြေမ့ေပ်ာက္ႏုိင္မွာပါ၊နာက်င္တာေတြေမ့ေပ်ာက္ႏုိင္မွအတူေနရတဲ့ဘဝခဏတာမွာေအးခ်မ္းတဲ့အသုိက္ျမံဳေလးကုိဖန္တီးႏုိင္မွာပါ၊ ေအးခ်မ္းေသာအသုိက္အၿမံဳကုိဖန္တီးႏုိင္မွကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊သူတစ္ပါးတုိ႔ရဲ႕စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းေတြကုိေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္ဇနက(မႏၲေလးစာသင္သား)
Categories General Knowledge Tags 15
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီလို့မထင်ပါနဲ့….
မိန်းမ ရော့ မင်းကြိုက်တာဝယ် ၊ ကြိုက်တာသုံးဆိုတဲ့ စကားထက်…. မိန်းမ အပြင်အတူသွားကြမယ်လေ ပြင်ဆင်လိုက် ၊ ဘာလိုချင်လည်း လိုက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ၊ စကားအသုံးပြုမှုလေးကပိုနွေးထွေးကျေနပ်စေရတာပါ။ မိန်းမ စားနှင့်ကွာ ဝမ်းမှမဆုံတာဆိုတဲ့၊… စကားထက်…..မိန်းမ ခဏတော့စောင့်ပေးနော်၊ဗိုက်ဆာပေမယ့် အလုပ်မပီးသေးလို့ပါဆိုတဲ့၊စကားအသွားအလာလေးက ပိုစိတ်ကျေနပ်စေရတာပါ။ မိန်းမ အိမ်အသုံးစရိတ်က ကုန်လှချည်လားဆိုတဲ့၊….စကားထက်…….မိန်းမ ကုန်ဈေးနှုန်းအခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ၊..လောက်အောင် ချင့်ချိန်ဝယ်ကြည့်ပေါ့ကွာ…မလောက်ရင်ပြောပေါ့ဆိုတဲ့၊ စကားလုံးလေးတွေရဲ့ ချုပ်ထိန်းသွားမှုက ပိုမလာတဲ့အသုံးစရိတ်နောက်မှာ စိတ်သက်သာရာရစေတာပါ။ မိန်းမ အချေအတင်မဖြစ်ချင်ဘူးကွာဆိုတဲ့ စကားထက် …..မိန်းမ ဘာအလိုမကျတာရှိလည်း …ညှိနှိုင်းကြမယ်ပြောကြည့်ဆိုတဲ့ ၁၀မိနစ်စာ …အချိန်ပေးလမ်းဖွင့်မှုက ပိုအကျိုးသက်ရောက်စေတာပါ မိန်းမ ပင်ပန်းတယ်ကွာ ..အဆင်ပြေပြေနေရအောင်ဆိုတဲ့ စကားထက်…..မိန်းမ ဒီနေ့တော့ ဘယ်လုပ်ငန်း ဘယ်အကြောင်းအရာမှာ အဆင်ပြေတယ် မပြေဘူးဆိုပီး သူငယ်ချင်းနဲ့ပြောသလို ရင်ဖွင့်ချပြောပြလိုက်တာက…နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စိတ်အဖုအထစ်ပြေလျော့စေတာပါ မိန်းမ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေစမ်းပါဆိုတဲ့..စကားထက်…..မိန်းမနေကောင်းကျန်းမာရဲ့လား၊ ဘာတွေစိတ်တိုင်းမကျတာရှိလည်းလို့ … Read more
A သွေးပိုင်ရှင်လေးများ၏ အချစ်ရေး
A သွေးပိုင်ရှင်လေးများ၏ အချစ်ရေး အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ရေခဲတုံးတစ်တုံးလို၊ ခပ်အေးအေးနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတတ်တဲ့သူလေးတွေပေါ့။ အေ သွေးလေးတွေရဲ့ မူလစရိုက်ကိုက ခပ်အေးအေးနေတတ်ကြတဲ့အတွက် သူတို့တွေဟာ အချစ်ရေးမှာရော၊ တခြားကိစ္စတွေမှာပါ တည်ငြိမ်သူလေးတွေ၊ ထုံပေပေလေးတွေလို့အပြောခံရတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ပြသနာကို ရှောင်ရှားနိုင်ကြတာ၊ ဖြစ်လာမယ့် ပြသနာတွေကို ကြိုတင်တွေးဆ တတ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့စကားအသွားအလာကို ထိန်းသိမ်းတတ်ကြတဲ့အတွက် ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးလို့ တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်းအပြောခံရတတ်တယ်။ နောက်ပြီးအလုပ်ထဲမှာစိတ်နှစ်ပြီး အလုပ်အပါ် တာဝန်ယူစိတ်အပြည့်ရှိတတ်ကြတဲ့အတွက် လူမှုရေးနဲ့တစ်ခြားကိစ္စတွေမှာလစ် ဟင်းတတ်ကြတယ်။ သူတို့လေးတွေဟာအနေအေးတတ်ပေမယ့်တကယ်တမ်းတော့အရမ်းနူးညံ့တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့အေးတိအေးစက်နဲ့မှုန်တေတေအမူအရာလေးတွေကြောင့် ချစ်သူရဲ့အထင်လွဲခြင်းကိုမကြာခဏခံရတတ်တယ်။ အချစ်ရေးမှာ အဲဒီလောက်ကံမခေကြပေမယ့် ချစ်သူရဲ့အားမလိုအားမရ၊ နားပူနားဆာလုပ်တာကို အမြဲခံနေရတဲ့သူလေးတွေပေါ့ ..။ Julia A ေသြးပိုင္ရွင္ေလးမ်ား၏ အခ်စ္ေရး အခ်စ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ေရခဲတုံးတစ္တုံးလို၊ ခပ္ေအးေအးနဲ႔ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိတတ္တဲ့သူေလးေတြေပါ့။ ေအ ေသြးေလးေတြရဲ႕ မူလစ႐ိုက္ကိုက ခပ္ေအးေအးေနတတ္ၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔ေတြဟာ … Read more